Golaha Wakiiladda Somaliland oo dib ugu celiyey saddex Xeer oo madaxweynuhu ku soo celiyey golaha | Casuura.com kala soco warar sugan & xoggo rasmi ah
Golaha Wakiiladda Somaliland oo dib ugu celiyey saddex Xeer oo madaxweynuhu ku soo celiyey golaha
Golaha Wakiillada Somaliland ayaa markii labaad madaxweynaha dib ugu celiyay saddex xeer oo ay hore goluhu u ansixiyeen, balse uu madaxweynaha xilka ka sii degaya dib ugu soo celiyey golaha wakiiladda.
Saddexdan xeer ee dib loogu celiyay madaxweynaha waxay kala yihiin xeerka booliska, xeerka xabsiyadda iyo xeerka duulista iyo hawadda, waxaanay saddexdaas xeer oo goluhu hore u ansixiyay, ka dibna loo gudbiyey madaxweynaha si uu u dhaqangaliyo, haseyeeshee madaxweyne Axmed Siilaanyo aya wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyey ka dibna golaha dib ugu soo celiyey.
“Madaxweynuhu saddexda xeer-ba wuxuu ku soo sameeyay wax-ka-beddel. Sida dastuurku dhigayo waxa weeyi, marka goleyaashu madaxweynaha u gudbiyaan xeer, wuxuu xaq u leeyahay in muddo 21 maalmood ah ku saxeexo ama uu wax-ka-beddel ku sameeyo. Markaa madaxweynuhu wuxuu maray dariiqii sharciga ahaa, saddexda xeer-na wuxuu ku sameeyay wax-ka-beddel. Xeerarkani muddo badan ayay golaha Wakiillada dhex yiileen. Soo jeedinta madaxweynaha goluhu waa in uu raaco, haddii lagu qanci waayo soo jeedinta madaxweynaha.”ayuu yidhi gudoomiyaha golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo isagu kalfadhiga golaha shirgudoominayey.
Waxaanu intaas raaciyay “Waxaa loo baahan yahay in 55 xildhibaan ay u codeeyaan xeerka. Markaana waxa weeye in sidii xeerku kaga baxay golaha Wakiillada, waa in madaxweynuhu ku saxeexo.Haddii la waayo in aqlabiyadii goluhu ku ansixiyay ee 55 xildhibaan ahayd, xeerkaasi wuu dhimanayaa. Waa in markaa xeer cusub la soo sameeyaa”
Xildhibaanadii fadhigaas joogay ayaa la waydiiyay laba su’aalood oo kala ahaa in ay ku qanacsan yihiin soo jeedintii madaxweynaha, taasoo markii ay u codaynayeen ay diideen. Iyadoo markii labaad-na loo codeeyay in xeerkii labada gole ee Guurtidda iyo Wakiilladu gudbiyeen ay raacsan yihiin iyo in kale. Cod aqlabiyad ah oo 55 ah ayaanay ku ansixiyeen xildhibaannadu saddexda xeerba.
Geesta kale guddoomiye Baashe Maxamed Faarax, ayaa sheegay in saddexda xeer ee ay madaxweynaha ku celiyeen in sharcigu madaxweynaha farayo in uu sidaas ku saxeexo, ansaxna ay ku noqdaan. Waxaannu yidhi “Markaa soo jeedintii madaxweynaha, madaxtooyada ayaanu ku celinay. Markaa madaxweynuhu waa in uu xeerka booliska, xeerka xabsiyada iyo xeerkii duulista hawadda, waxaanay ku dhaqan gelayaan sidii labada gole ay ku ansixiyeen.”
Dhinaca kale waa markii u horraysay ee golaha Wakiillada Somaliland ay madaxtooyada ku celiyaan xeerar uu madaxweynuhu wax-ka-beddel ku soo sameeyay, isla markaana ay hore u ansixiyeen labada gole ee Guurtidda iyo Wakiiladdu.